Fikradaha Maqaarka ee Minecraft ee ugu Fiican & Talooyin (2020) - Ciyaar
Fikradaha Maqaarka ee Minecraft ee ugu Fiican & Talooyin (2020)
Minecraft wali waa aduun si xoogan ciyaartoy u dhisan oo kuu keenaya sahlanaanta inaad wax uun dhisto. Waxaad haysataa ikhtiyaarro aad ku habeyn karto wax kasta, oo ay ku jiraan maqaarka dabeecaddaada. Waxaa jira habab badan oo adiga loogu talagalay si aad hawshan u qabato.
Waxaad ka heli kartaa dhowr farshaxanno qurux badan khadka tooska ah oo bixiya maqaarka Minecraft. Haddii kale, waxaa jira barnaamijyo aan tiro lahayn iyo barnaamijyo kuu oggolaanaya inaad sameysid maqaar qaas ah oo aad ku isticmaasho Minecraft.
Maxaa Loo Isticmaalaa Maqaaradaha Minecraft?
Maqaarka Minecraft waa hab hal abuur leh oo lagu sahaminayo fursadaha ciyaarta. Waxay kuu keenaysaa dareen ah wax ‘cusub’ ama ‘cusub,’ oo waxaad ku guuleysatay khibrad aad u fara badan. Haddii aad hesho wax u dhigma dookhaaga, waa wax cajiib ah.
Dad badan ayaa doorbidaya maqaarka 'Minecraft' maxaa yeelay waxay leeyihiin ikhtiyaar ay ku sameystaan ​​dabeecad u ekaato naftooda. Dadku sidoo kale waxay door bidaan inay u ekaadaan jilayaasha ay ugu jecel yihiin warbaahinta kala duwan iyo doorka jilayaashaas soo jiidashada leh. Waxaa jiri kara sababo badan.
Sidee Loogu Adeegsadaa Khilaafka Xbox One?
Fikradaha Maqaarka Minecraft:
Qof kastaa maaha dabiici ahaan mala-awaal ama hal-abuur. Waxaad noqon kartaa qof u maleynaya inay jiraan jidad fara badan oo Minecraft ah oo banaanka yaala. Waxaa laga yaabaa inaad banaan tahay ama aad leedahay meel hal abuur leh. Waxaad u maleyn kartaa in maqaarka aad rabto uu mar horeba kajiro meesha. Si kastaba ha noqotee, taasi maahan ujeedku. Ujeeddadu waa adiga inaad ugu raaxeysato ciyaartaada shaqsiyad shaqsiyeedka ugu fiican ee suurtogalka ah.
Waa kuwan fikrado laga yaabo inay kiciyaan cabitaankaaga hal abuurka ah:
1. Warbaahinta loo Waxyooday
Ma leedahay show TV aad jeceshahay ama filim? Kadib sidee ku saabsan inaad siiso dabeecada aad jeceshahay isku day? Waxaad ku haysataa fursado badan Minecraft si aad u hesho ama u abuurto dabeecad. Haddii aad leedahay Cayaaraha Fiidyowga kale, xitaa Animes, farshaxanada qaarkood waxay si joogto ah kuu siiyaan qaar ka mid ah maqaarka ugu wanaagsan ee dabeecadda Minecraft.
Sidaa darteed, tani waa mid ka mid ah qaybaha ugu fudud uguna ballaaran ee la heli karo. Waxaad heli kartaa ku dhowaad dabeecad kasta. Ma waxaad raadineysaa maqaarka Anime Minecraft? Waxaa laga yaabaa in wax ka macquulsan ciyaarta Of Thrones? Waxyaabaha ayaa ah, waxaad runtii hubaal ka heli doontaa hargahaas. Maqaarka caanka ah waligood ma baxaan.
Haddii aysan waxba ahayn, marwalba waad abuuri kartaa taada.
2. Superheroes Iyo Villains
Qof kastaa wuxuu ku hamiyaa inuu noqdo superhero ama supervillain! Waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad labisato oo aad ku dhex mushaaxdo adduunka dhabta ah, laakiin aad-aad u-beddeli kara astaamahaaga Minecraft.
Waxaad heli kartaa Knight Dark ama nin bir ah. Waxaa laga yaabaa inaad wax badan ka rabto majaajillada. Waxyaabaha ayaa ah, superheroes had iyo jeer waxay noqon doonaan qaab.
3. Qaybaha Abstract
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad istaagto oo aad u ekaato dabeecad gebi ahaanba ka duwan. Waxyaabaha la soo gaabiyey waa isku dhaf midabyo leh maqaar iyo indho. Xad kuma lihid sida dabeecadaadu u ekaan karto. Sidaa awgeed, waad ka dhigi kartaa si dabeecadaadu u leedahay indho cad iyo jir gebi ahaanba madow.
Xitaa waad ku tijaabin kartaa midabada neon iyo midabada ku hareeraysan midabayntaada. Dadka qaarkiis waxay abuureen astaamo u muuqda midabyo midabbo ah, xitaa qaanso roobaadka. Waad ku tijaabin kartaa Fikraddan Maqaarka Minecraft, sidoo kale.
4. Suudhadhku Waa Fududahay
Madow, caddaan, lacag, cawl, casaan. Waxaa laga yaabaa in ku habboonaanta aysan sidaa u sii fududaan, laakiin waxaad u awoodi kartaa hoos iyaga sida ugu fudud. Haddii aadan rabin inaad hesho midabbo 'qoto-dheer', waxaad midabayn kartaa suugaanta dabeecaddaada dhammaan madow oo wali waxaad uga dhigaysaa mid soo jiidasho leh.
Dacwadaha waligood kama baxayaan qaabka, ha ahaato nolosha dhabta ah ama ciyaar. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad tijaabiso, waxaa jira jaakado dhaadheer, jaakado, fedora, iyo waxyaabo badan oo aad ku dari karto dabeecadaada. Waa sax! U hel dacwad dabeecaddaada oo arag sida ay dabeecaddaadu u ekaan doonto!
5. Tag Wax Yar oo Yar
Kani waa howsha lagaaga baahan karo inaad ku shaqeyso hooska iyo midabbada wax badan. Waxay kuxirantahay nooca 'dharka caadiga ah' ee aad ku go'aansatay dabeecadaada. Helitaanka qaab yar oo aan caadi ahayn ma aha wax fudud, laakiin waad istaagi doontaa haddii aad ka dhigi karto inay shaqeyso. Hoos waxaa ku yaal tilmaamo kaa caawinaya inaad qaabeeysid maqaarka dabeecadaada, si taasi u caawin karto.
Sidee Loo Soosaaraa Fikradaha Maqaarka Duulista
Dad badan ayaa ka niyad jaba inay abuuraan Maqaarkooda Minecraft. Haddii aad u maleyneyso inaad u baahan tahay inaad noqoto farshaxan si aad u sameysid maqaarka aad jeceshahay, waad qaldan tahay! Halkan waxaa ah hage deg deg ah oo leh talooyin waxtar leh oo kaa caawinaya inaad sida ugu fiican uga baxdo maqaarka Minecraft!
Fahmaan Khariidadda Calaamadaha:
In kasta oo Minecraft uu yahay barxad ku habboon isticmaalaha, haddana waxay noqon kartaa wax laga naxo in la fahmo khariidadda astaamaha. Ma ahan lugaha fudud, madaxa, indhaha, iyo waxa aan ahayn. Taabadalkeed, waxaad heli doontaa wax la mid ah dabeecadda loo dhigay sanduuqa 'xirmo'. Ka fikir sida sanduuqyada kartoonada oo aad ka heleyso qalab tiknoolaji ah iyo wixii aan ahayn.
Xirmooyinkaani waxay u furmayaan inay yeeshaan daboollo kala duwan. Sidoo kale, khariidad jilayaal ah oo loo yaqaan 'Minecraft map' waxay leedahay laba jibbaarane iyo furfuran qayb kasta oo dabeecadda ka mid ah. Ujeeddadu waa in la bixiyo fudeyd sameynta qaabeynta sida ay isu imaaneyso. Marwalba waad hubin kartaa horudhaca, laakiin maahan kaliya 'muuqaal-saaxiibtinimo' kuwa aan ahayn farshaxanno.
Noocyada qaar waxay leeyihiin khariidad dabeecad adeegsade ah. Qaar kale waxay yeelan karaan qaab aad u adag oo aad midab u yeelan karto. Iyadoo aan loo eegin, marka aad hesho xoogaa tababar ah, waxay noqon doontaa mid raaxo leh. Dhammaantood waxay la yimaadaan sumad, markaa taasi waa ku daris.
Waxaad Had iyo jeer Habeyn Kartaa:
Iyadoo sanado heer sare ah iyo malaayiin ciyaartoy adduunka oo dhan ah, Minecraft waxay leedahay uruurinta ugu badan ee hargaha. Si kastaba ha noqotee, wali waa macquul in laga yaabo inaadan helin waxaad raadineysay. Tusaale ahaan, waxaad ogaan kartaa maqaar u muuqda mid wanaagsan laakiin leh midabyo aan u dhigmin dookhaaga.
Qaybta ugu fiican ee ku saabsan Minecraft waa inaad had iyo jeer astaysto maqaarradan. Ku ciyaarista qaabeynta iyo u adeegsiga midabbo ama midabbo kala duwan maqaarka waa hab fiican oo loo abuuro maqaarka. Waxay ku siinaysaa gundhig aad ku bilowdo, ka dibna waad ku tababbaran kartaa sida aad u socoto.
Waxaad ka heli doontaa faham wanaagsan qayb kasta, xitaa haddii ay kugu wareerineyso inaad fahamto khariidadda astaamaha.
Tilmaamaha Talooyinka iyo Fikradaha:
Way ka fiican tahay inaad ku bilowdo maqaarka aan midab lahayn gabi ahaanba. Waxay kuu oggolaan doontaa inaad ku hoos hadho hadba sida ay kugu habboon tahay.
Timaha, ha u isticmaalin hooska jaantusyada. Weli waa pixel iyo dabeecad la mid ah, markaa waa inaad ujeeddo u noqotaa hooska toosan. Haddii aad rabto inaad ku darto midab iyo muuqaal, waxaad ku dari kartaa midabada gudaha sidaad jeceshahay ka dib markaad sharaxdo baloogga. Tani waxay ku siin doontaa muuqaal wanaagsan.
Jirka ama dharka, waxaad ku bilowdaa inaad hoos hadh yeelatid qaybaha ugu madow ee jirka. Taasi waa sare, dhexe, iyo hoose ee dabeecada. Markaad sidaa sameyso, waxaad midabeyn kartaa jihada toosan iyo kuwa toosan ee ku hareeraysan oo ah midab kaas oo ah hal hoos oo ka fudud midabka ugu madow. Tani waxay kuu keeneysaa waayo-aragnimo midabeyn oo wanaagsan adiga.
Lugaha ama surwaalka, qaybta dhexe ee sare ayaa loo malaynayaa inay tahay tan ugu mugdiga badan ka dibna dibedda u ballaarta si ay u fududaato. Tani waa sida ugu fiican ee aad ugu midabeyn karto oo aad ugu asturi karto shirkaddaada 'Minecraft' fudeydkeeda. Waad ku tijaabin kartaa kabo iyada oo loo eegayo hal-abuurkaaga.
Hadda waxaad haysataa qaar ka mid ah fikradaha ugu fiican uguna hal-abuurka badan oo lagu tijaabiyo. Intaa waxaa sii dheer, waxaad haysaa talooyin ku saabsan sidaad u shaqeyn lahayd una abuuri lahayd Maqaarkaaga Minecraft. Haddii aadan hubin, waxaad had iyo jeer raadin kartaa maqaarka Minecraft iyo fikradaha ugu wanaagsan ee laga soo dejiyo khadka tooska ah!
Dayactir khaladka 'Minecraft Remoteconnect Error'
RTX 2080 vs GTX 1080 - Keebaa Ku Fiican Ciyaaraha?
Wyze Watch Pre Order - Sidee Loo Iibsadaa Hagaha?
vlc media player soo dejiso macs
sare ama kulan xakameynta hoose
waa maxay hulu ka khayrbadan ama la mid wadhaf
movies watch online Streaming for free
sida aad u heli Ra'iisul amazon lacag la'aan ah nolosha
goynta xadhiga telefishanka